जकार्ता किन डुब्दै छ? हामी तपाईलाई सबै कुरा व्याख्या गर्दछौं नेटवर्क मौसम विज्ञान
हामीलाई थाहा छ कि यस शताब्दीमा मानिसले सामना गर्ने मौसम परिवर्तन एक सबैभन्दा खतरनाक विश्वव्यापी प्रकोपहरू मध्ये एक हो। जकार्ता शहरहरू मध्ये एक भएको छ जुन विश्वको बाँकी शहरहरू भन्दा छिटो डुब्न थाल्छ। विज्ञहरूका अनुसार अनुमान छ कि २० sea० सम्ममा समुद्री सतहको वृद्धि दर यथावत रह्यो भने जनसंख्याको एक तिहाई भाग डुब्न सक्ने छ। तसर्थ, यो लगभग पूर्ण निश्चितता संग परिचित छ कि जकार्ता डुब्छ।
यस लेखमा हामी तपाइँलाई जलवायु परिवर्तनको नतिजा के के हुनाले समुद्री सतहको बृद्धिलाई नकरात्मक असर पार्दछ र जकार्ता किन डुब्दैछ भनेर बताउन जाँदैछौं।
1 जकार्ता किन डुब्दै छ?
3 जकार्ता डूब्यो र सम्भावित उपचारहरू
4 डुब्ने शहरहरू
जकार्ता किन डुब्दै छ?
हामीलाई थाहा छ कि जलवायु परिवर्तनले ग्लोबल वार्मिंगको कारण सम्पूर्ण ग्रहको औसत तापमान बढाउँदछ। दशकौं जीवाश्म ईन्धनको ह्रास र भूमिगत पानी आपूर्तिको अत्यधिक प्रयोगका साथै समुद्री सतहको बढ्दो स्तर र मौसमको ढाँचाले गर्दा समुद्री तटमा क्षेत्रहरू बढ्दै गइरहेका छन्। यस्तो देखिन्छ कि पूर्वी जकार्ताका विभिन्न क्षेत्रहरू समुद्री सतहको स्तरले गर्दा हराउन थालेका छन्।
यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि जकार्ता भुइँचालो क्षेत्रमा दलदल जग्गाको साथ निर्माण गरिएको हो। यो ठाउँमा १ 13 नदीहरू संगममा भेला हुन्छन्, त्यसैले माटो बढी जोखिममा छ। हामीले यस तथ्यलाई भारी यातायातको अस्तित्व, ठूलो जनसंख्या र गरीब शहरी योजनालाई पनि जोड्न पर्छ। सुदूर उत्तरमा पाइपयुक्त पानी प्रणाली नभएको कारण जकार्ता डुब्दै छ, त्यसैले स्थानीय उद्योग र केही लाखौं अन्य मानिसहरूले भूमिगत एक्वीफरहरूको फाइदा लिन्छन्।
यी भूमिगत एक्वाइफर्सको शोषणमा उनीहरूसँग पहिले नै केहि प्रभावहरू छन् जसले जकार्ता डुब्न निम्त्याउँछन्। यदि हामीले अनियन्त्रित रूपमा भूगर्भीय पानी निकाल्छौं भने, हामी माटोले समर्थन गुमाउने छौं। भूमि सतह वजन समर्थन गर्न सक्ने समर्थनको अभावमा बाटो दिँदैछ। त्यसकारण, पानीको व्यापक र ठूलो निकायले जमिन डुब्नेछ। यो बनाउँछ जकार्ता केही क्षेत्रहरूमा २ 25 सेन्टिमिटरसम्म दोस्रो हुन्छन् जहाँ उनीहरू अत्यधिक कमजोर हुन्छन्। यी ह्रास मानहरू प्रमुख तटीय शहरहरूको लागि विश्व औसत दुई गुणा हो।
Sabemos que जकार्ताका केही अंशहरू समुद्री सतहभन्दा meters मिटर तल छन्। यसले अपरिवर्तनीय परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्दछ र लाखौं मानिसहरूलाई विभिन्न अवस्थित प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा छोड्छ। यदि हामीले ध्यानमा राख्यौं कि जलवायु परिवर्तनले विश्वभरि हिमनदीहरूको बरफलाई पग्लिरहेको छ भने, समुद्री सतह बर्षहरूमा बढ्नेछ। जति धेरै समय बित्नेछ, त्यहाँ धेरै समस्याहरू हुनेछन् र जकार्ता डुब्नेछ।
यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्दा बाढी बढी सामान्य हुन्छ, विशेष गरी उष्ण कटिबन्धीय राष्ट्रको ओसिलो मौसममा। पूर्वानुमान अनुमान गर्दछ कि यसको परिणामहरू ग्लोबल वार्मिंगको कारण समुद्रको सतह बढ्दै जाँदा बाढी अझ खराब हुन्छ। तल्लो भूमि समुद्री सतहको सम्बन्धमा छ र यो जति बढ्छ, परिणामहरू त्यति नै खतरनाक हुन्छ। न केवल अर्थव्यवस्था परिवर्तन हुनेछ, तर त्यहाँ आन्तरिक क्षेत्रहरु मा जनसंख्या को एक मजबुत पलायन हुनेछ।
त्यहाँ जकार्ताका केही क्षेत्रहरू छन् जुन समुद्री सतहको वृद्धिले गर्दा कब्जामा लिएको छ र शहरको केही क्षेत्रमा डूबको कारण छ।
जकार्ता डूब्यो र सम्भावित उपचारहरू
यस अवस्थालाई कम गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएका उपचारहरूमध्ये हामीले जकार्ता खाडीमा कृत्रिम टापुहरू निर्माण गर्ने योजनाको अनुमोदन पाउँछौं। यी टापुहरूले जाभा सागरको बिरूद्ध एक प्रकारको बफरको रूपमा काम गर्ने छ र समुद्री सतहमा वृद्धि यत्तिकै अचानक हुने छैन। यो विशाल समुद्री पर्खाल निर्माण गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि यस स्थितिमा यस परियोजनाले अनुमान गरेको कुनै ग्यारेन्टी छैन billion० अरब डलरको बजेटले डूब शहरको समस्या समाधान गर्न सक्छ.
हामीलाई थाहा छ कि जकार्ता डुब्दै छ, र अझै यस प्रोजेक्टले ढिलाइ गरेको वर्षौं ढिलाइ भयो जुन निर्माणलाई अझ गाह्रो बनाउँदछ। बढ्दो समुद्री सतहको प्रभावलाई कम गर्नका लागि अवरोधहरूको निर्माण पहिले नै प्रयास गरिएको छ। रास्दी जिल्लामा समुद्री तटमा पर्खाल र अन्य धेरै जोखिमको साथ निर्माण गरिएको थियो। यद्यपि यी पर्खालहरूले पहिले नै क्र्याक गरिसकेका छन र सidence्केतको स .्केत देखाउँछन्। पानीलाई भित्रबाट भित्र पस्न र दरारहरू सिर्जना गर्न सुरु गर्नबाट रोक्न यो सम्भव थिएन। पानी यी पर्खालहरु मा पार र शहर को गरीब छराहरू मा साँघुरो सडक र shakes को सबै भूलभुलैया भिगोयो। यो सबै स्वच्छता र बजेटको अभावको परिणामको साथ।
अवस्थित वातावरणीय उपायहरूले थोरै प्रभाव पारेकाले अधिकारीहरूले अन्य कडा उपायहरू खोजिरहेका छन्। उपाय यो हो कि राष्ट्रले अर्को नयाँ राजधानी खोज्नु पर्छ। स्थान तुरुन्त घोषणा गर्न सकिन्छ, सब भन्दा सुरक्षित बर्नियो टापुमा सम्पूर्ण शहर को स्थानान्तरण हो।
यो देशको प्रशासनिक र राजनीतिक हृदय स्थान परिवर्तन गर्न को लागी एक चुनौती हो, तर यो राष्ट्रिय संरक्षण को एक कार्य को रूप मा सेवा गर्न सक्छ। ध्यानमा राख्नुहोस् कि यो योजना जोखिमपूर्ण छ र जकार्ताको मृत्यु जस्तो देखिन्छ।
जकार्ता मात्र डुब्दै छ, तर त्यहाँ अन्य शहरी केन्द्रहरू पनि छन्। विश्वभरि समुद्री सतह समस्या र मौसम परिवर्तनको उच्च जोखिमसहित समुद्री तटहरू रहेका शहरहरू छन्। शहरहरू बाट भेनिस र शंघाई, न्यू ओर्लिन्स र बैंकक। यी सबै शहरहरू पतनको जोखिममा छन्, तर यो याद राख्नुपर्दछ कि जकार्ताले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न थोरै गरेको छ।
हामीलाई यो नबिर्सनुहोस् कि जलवायु परिवर्तनले समुद्री सतह मात्र बढाउँदैन, तर उष्ण कटिबन्धीय आँधीबेहरीको आवृत्तिले किनारका शहरहरूमा ठूलो प्रकोप निम्त्याउँछ।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाई जकार्ता डुब्ने पनोरमाको बारेमा बढी जान्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » जकार्ता डूब्यो